Iindaba-ukubalwa kweentsuku eziyi-8! I-S-conning ikumema kwi-Shanghai CPhI kunye ne-P-MEC China!
I-P-MEC China, umboniso wamazwe aphesheya odibanisa iimveliso ezihamba phambili zamanye amazwe kunye namashishini adumileyo alapha ekhaya, azakubanjelwa eShanghai New International Expo Centre ukusukela nge-16 ukuya kwe-18 ku-2020. Apha, uya kubona iimveliso ezintsha ezikhoyo ngabavelisi abaphambili bezixhobo zemveliso kunye izixhobo zokupakisha, fumana izisombululo zokupakisha ngasemva.
Inkampani S-conning technology group Ltd.
Ixesha: 16th - 18th 2020
Iimodeli ezikhoyo: I-S400 yesantya esiphakamileyo sokuhlangana kunye neenkqubo zokulebhelisha iisirinji ezilahliweyo, ukususa indlwane, ukuhlolwa kwesibane kunye neqonga lesikhuseli.
Kule mihla umhlaba uyabandezeleka nge-COVID-19, kunye nemfuno engxamisekileyo yesitofu sokugonya se-COVID-19, i-S-conning iphucule ubuchwephesha beelebheli ezikhethiweyo, yonyusa uzinzo lwentsebenzo, yaqinisekisa ukuveliswa koomatshini abakumgangatho ophezulu abenza amayeza, besebenza Indima ebalulekileyo kwimveliso yobuninzi beyeza lokugonya le-COVID-19 kwixesha elikhethekileyo.
Iimodeli ezikhoyo: I-S308 ejikelezayo ejikeleze umatshini wokuPhawula ngebhotile (Iikhatriji)
Yonke imveliso kunye noyilo lonke oluvela kwi-S-conning iqulethe imbeko yethu kwiNzululwazi yezoNyango, kunye nokutyekela kubuchwephesha, ulawulo lwethu olungqongqo ngomgangatho woomatshini kunye nesithembiso sethu ngokhuseleko lomsebenzisi. Kulo mboniso, i-S-conning izakubonisa iyantlukwano yemveliso ukuqinisa ixabiso lethu, kwaye ikwayintwasahlobo engapheliyo yobukho bamazwe aphesheya.
I-S-conning Technology Group Ltd, yenye yezona zinto zininzi ezenziwe ngomatshini oomatshini, eyasekwa ngo-2010, ezinikele ngokukodwa kwi-High-end eyenziwe ngezixhobo zoMatshini kunye nokwenza ukuqonda.
Ikomkhulu lekhampani libekwe eGuangzhou Science City. Umzi-mveliso ugubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-5200, kunye nendawo efanelekileyo yeofisi kunye neendibano zocweyo zokuvelisa. Ngokusebenzisa isiqinisekiso sekhwalithi esemgangathweni ye-ISO9001 kunye nesatifikethi se-CE, sidityaniswa kunye: nemveliso, uphando kunye nophuhliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, sinika uluhlu olupheleleyo lwezisombululo zokulebhelisha / ukupakisha kunye neenkonzo ezilungiselelwe amayeza, imichiza yemihla ngemihla, ukutya, amachiza, amashishini ombane kunye necuba.
I-S-conning tech ngaphezulu kweminyaka eli-10 yokuqhubela phambili, ijolise ekusebenzeni komgangatho wezixhobo, ngokulandela umkhondo we-UEO (ukusebenza kwamava omsebenzisi), kunye nokuphucula uyilo kunye nokugqibelela kweemveliso; ukuvelisa okungapheliyo, ukumiselwa komgangatho wamazwe aphesheya, i-S-conning ifumene ipatent yoyilo kunye nokuyila, umatshini wokugcwalisa osele ugcwalisiwe kunye nomatshini wokuphawula. Ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo enzulu emva kokuthengisa kubasebenzisi bethu bokugqibela kukulandela okungapheliyo kwe-S-conning ukuhlangabezana rhoqo nokulindelweyo kunye neemfuno zeshishini.
Umatshini wokuTywina wePlastiki, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,